Hotel Aventura Universal ao amin'ny Universal Orlando Resort
Ny fijerena aloha: Ny Hotel Aventura Universal ao amin'ny Universal Orlando Resort
Fanampiana lehibe dia mbola tonga any amin'ny Universal Orlando Resort. Miaraka amin'ny hotely roa vaovao misokatra nanomboka tamin'ny taona 2014, dia manitatra indray ny toeram-piorenana ao an-toerana ny Universal Orlando manolotra sarany iray hafa sarobidy mba hijanona ao amin'ny toeram-pitsangatsanganana. Voatendry hanokatra amin'ny volana aogositra 2018 ny Hotel Aventura Universal dia hanana trano fidiovana farany indrindra, ahitana tranobe misy rihana 16, tantaram-piravoravoana misy ankehitriny, ary lobby iray misokatra ho an'ny lozam-pifamoivoizana miaraka amin'ny varavarankely 18 metatra.
Ny hotely 600-room dia ho sokajy ho an'ny iray amin'ireo trano fandraisam-peo "Primeur" Universal, izay mametraka azy io amin'ny vidiny mitovy amin'ny Loews Cabana Bay Beach Resort . Misy làlam-pifanandrinana telo, anisan'izany ny efitranom-pahefana maimaimpoana 314 metatra sy efitrano deluxe 385 metatra, izay ahitana ny varavarankely misy varavarankely, bainina sy zava-poana, ary ny safidy hanavaozina ny " "noho ny fijery manjavozavo avy eny amin'ny ambaratonga avo indrindra amin'ny tilikambo mafana. Ny efitrano fahatelo kosa dia ny 591 kare'ny efitrano fitsangatsanganana, izay matory amin'ny 6 ary ahitana efitrano iray miaraka amin'ny fandriana sy sofa kabary ary faritra iray ho an'ny ankizy izay misy roa kambana roa.
Ny Hotel Aventura Universal dia hanana toerana mahatalanjona akaikin'ny Loew's Sapphire Falls Resort ary akaikin'ny valan-tserasera telo ao Universal Orlando, Universal Studios Florida , Nosy Adventure , ary Volcano Bay . Ny vahiny dia afaka hiditra sy avy amin'ny valan-tserasera telo sy Universal CityWalk , distrika fisakafoanana sy fivarotana, amin'ny alàlan'ny lalan-kely na seranan-tsambo maimaim-poana avy amin'ny hotely.
Ny sasany amin'ireo lohahevitra ao amin'ny Hotel Aventura Universal dia ny baraingo ambony roapolo, izay hanolotra fomba fijery mahatalanjona amin'ny valan-tserasera rehetra ao amin'ny Universal Orlando. Ny mpitsidika dia ny haavon'ny maso amin'ny tendron'ny Krakatau eo akaiky, ny toeram-ponenan'ny valan-java-boaharin'ny Volkano Bay Universal Volkano Bay 200 metatra. Ny hotely dia manana dobo filaminana mazava sy dobo fantsom-pisiana, miaraka amina kiririoka ho an'ny ankizy madinika.
Hisy ihany koa safidy fisakafoanana, anisan'izany ny efitrano fisakafoanana misy efitra fisakafoanana miaraka amin'ny efitrano dimy.
Ireo marika amin'ny fijanonana ao amin'ny Hotely Universal Orlando
Mila antony maromaro hifidy ny Hotel Aventura Universal? Ny fijanonana ao amin'ny iray amin'ireo trano fandraisam-bahiny ao amin'ny Universal Orlando Resort dia mitondra tombontsoa be dia be izay afaka mamonjy anao amin'ny fotoana sy vola.
Toerana mahatalanjona: Ny trano rehetra dia mandeha lavitra eny amin'ny valan-javaboary sy Universal CityWalk ary izy rehetra dia manolotra serivisy maodranon'ny bisy maimaim-poana. Ankoatra izany, ny telo amin'ireo trano ireo dia servisy amin'ny taxi-free rano.
Fialam-boly Universal Express: Rehefa mijanona ao amin'ny lisitra ofisialy ofisialy ao amin'ny sokajy "premiered" na "preferred" ianao, dia hahazo ny Universal Express Passes ianao sy ny fianakavianao, izay ahafahanao mampiasa lin-kafatra haingana amin'ny fiaramanidina sy ny toetrany. Izany dia hanampy anao handany fotoana bebe kokoa hiandry mandritra ny fotoam-pitsapana. (Mariho fa ny "Aventura Hotel Universal" dia ao amin'ny sokajy "anton-tsarimihetsika", noho izany dia tsy mandray an'io perk ity ny vahiny.)
Ny fidirana an-tsekoly aloha: Ny vahiny ao amin'ny Property universal dia nomena ny fidirana ao amin'ny The Wizarding World of Harry Potter sy ny Volkano Bay universe iray ora alohan'ny hanokafana ny valan-javaboary.
Fialam-boly malalaka: Manana karazana hetsika fialam-boly isan-andro toy ny "filalaovana ny filalaovana" mandritra ny alina ny dobo filomanosana ao amin'ny Orlando. Ny fananana sasany dia manana sakafo karazana.
Fanomezan- tombontsoa: Ny vahiny dia manana tombontsoa amin'ny fametrahana ireo tombontsoa amin'ny efitranony, noho izany dia azo omena alalana any amin'ny efitranonao ny fividianana fividianana sy fisakafoanana manerana ny Universal Orlando Resort.
Famindrana fividianana: Fikolokoloana amin'ny fivarotana fahatsiarovana? Ny fividianana fanomezam-pahasoavana anananao ao amin'ny valan-javaboahary na ny Universal CityWalk dia azo alefa any amin'ny hotely maimaimpoana maimaimpoana, ka tsy voatery mitondra kitapo fanampiny miaraka aminao intsony.
Wi-Fi maimaim-poana: Manana WiFi maimaim-poana ny hotely rehetra ao amin'ny Orlando Resort. Misy ihany koa ny Wi-Fi maimaimpoana amin'ny sehatra rehetra.
Mijanona mafana ao amin'ny Universal Orlando
Manana toeram-pambolena sy fiaramanidina mahafinaritra avokoa ny seranam-piaramanidina Universal Orlando rehetra, ary ahitana sari-tany mahafinaritra ahitana ranon-drano, rivo-doza ary kilaometatra.
Raha mitsidika ireo valan-javaboary, dia misy ihany koa fomba maro hitazonana hafanana ao amin'ny hafanana Orlando , avy amin'ny fiaramanidina matevina sy ny fitsangatsanganana an-tongotra mankany amin'ny toeram-pisakafoanana rano sy trano fivoahana glaciers.
Top 10 Sarin-tanim-bilany matevina indrindra any Etazonia
The Coil Coaster Incredible Hulk
Manaova dia an-dàlana ho any an-tampon'ny Hogwarts Express
Hershey, Pennsylvanie, ho an'ny fianakaviana
Mankalaza ny andro nahaterahana ao amin'ny Walt Disney World
Snacks On a Plane: Hacking Pinterest Ho An'ny Hevitra Misakafo
8 Fahadisoana amin'ny fiarandalamby mampiavaka
Manatrika ny Monterey Bay Aquarium
Ny Restaurant Abracadabra dia sombin-tsakafo feno felana
Tranom-bakoka National Museum of Natural History Smithsonian
The 10 Best Budget Hotels at Cape Cod 2018
Tari-dalana momba ny Travel amin'ny fomba fitsidihana an'i Seoul amin'ny teti-bola
5 Parke Maine RV mila mitsidika
Village Zoar ao Ohio
Ireo teboka valo mahatsiravina indrindra any Andrefan'i New York sy Ontario
Top 10 Vacation Rentals ho an'ny Super Bowl XLIX